Alarobia 18 May 2011 – Rodobe eny Anosy - rov@higa
16 Mai 2011, 23:31pm
Vita izany ny fandaminana ary vonona hirodorodo ny vahoaka Malagasy. Eny Anosy ny fotoana amin’ny Alarobia 2011 hoavy izao. Hiray feo ny rehetra amin’ny fitakiana ny fialan’ny FATE eo amin’ny fitondrana noho ny tsy fanajany ny demokrasia ka anaovany zinona ny safidin’ny vahoaka Malagasy. Tsy Antananarivo irery akory no hiatrika izany fihaonan-dehibe izany fa Madagasikara iray manontolo mihintsy. Delegasiona maro avy any amin’ny Faritra no tonga eto an-drenivohitra hifanampy amin’ny famerenana ny ara-dalàna eto amin’ny Firenena.
Famerenana ny ara-dalàna hatrany no fototry ny tanjona itoloman’ny vahoaka Malagasy hatreto. Voarakitra ao anatin’izany ny fiverenan’ireo Filoha roalahy sesitany any ivelany noho ny tsy fitovizan-kevitra politika. Manaraka izany ny famoahana ireo gadra politika rehetra mba hisian’ny fitoniana politika eto Madagasikara. Ary farany ny fanaganana tetezamita tena iaraha-mitantana sy iombonana mba tsy isian’ny mizana mitanila amin’ny fikarakarana ny fifidianana hamadihana ny pejy maizina misy ny Firenena.
Tamin’ny fiverenan’I TGV avy any Tiorkia anefa dia mbola maneho fiziriziriana sy tsy fanetren-tena ity mpanongam-panjakana ity. Maneho tsy fahavononana hifampidinika intsony ny tenany ary nilaza mazava fa “tsy fotoanan’izany intsony izao fa fotoanan’ny asa amin’izay”. Lainga tsara lahatra manodidina ny diany tany ivelany no nataony manoloana ny mpanao gazety niatrika azy. Mandritra izay fotoana izay anefa no nametrahan’ilay mpanolotsaina manokana azy vaovao Paul Mailhot Rafanoharana. Nambaran’ity farany tamin’ny gazety mpiseho isan’andro iray fa “kaikerin’ny amboakely tiany” I TGV satria “gadrain’ireo nanampy azy tamin’ny fanonganam-panjakana ary tsy manana fahaleovan-tena tanteraka amin’ny fandraisana fanapahan-kevitra”. Tsotra ny anton’izany : jiolahy politika avokoa no nampiasa ny fahasahiana nananan’ilay jiolahim-boto ka lasa mifamatotra samy jiolahy ankehitriny.
Araky ny filazan'ny TVM io hariva io dia nihazo an'i Afrika Atsimo androany hono i TGV ary mety hihaona amin'i Jakob Zuma. "Wait and See"